दुई हप्तामै तौल घटाउँन चाहानु हुन्छ ? तौल घटाउँन यो उपाय अपनाउँनुहोस् « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
दुई हप्तामै तौल घटाउँन चाहानु हुन्छ ? तौल घटाउँन यो उपाय अपनाउँनुहोस्
यदी तपाईलाई मोटोपनले सताएको छ भने हामीले भने झै गर्नुस् २ हप्ता मै मोटोपनबाट छुटकारा पाउँनु हुनेछ । हो, चाँडै नै तौल घटाउन चाहनुहुन्छ तर आफूले सोचेजस्तो भइरहेको छैन भने हामी तपाईंलाई यसका लागि तरिका बताउँदैछौं ।
धेरै बेरसम्म बसिरहँदा शरिरमा अत्यधिक बोसो जम्मा हुने गर्दछ । मिसौरी विश्वविद्यालयका शोधकर्ताका अनुसार बसिरहँदा वा चार घण्टाभन्दा धेरै समयका लागि निष्क्रिय रहँदा तपाईंको मेटाबोलिजम स्लो हुन्छ जसले सजिलै बोसो जम्मा हुने गर्दछ । एजेन्सी ।